Home News Xog: Ma Ogtahay in qaabkaan loo Bixiyay Lacagta R/wasaare Kheeyre Siiyay Xildhibaanadda...
Xog: Ma Ogtahay in qaabkaan loo Bixiyay Lacagta R/wasaare Kheeyre Siiyay Xildhibaanadda Jawaari kasoo Horjeeday!!
Ra’iisul wasaaraha dawladda Fadaraalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa isagoo kaashanaya saaxiibadiisa kala ah Agaasimaha Madaxtooyadda Soomaaliya Fahad Yaasin iyo Shariif Sakiin waxa uu dadaal aad u xoog badan galiyey sidii uu xilka uga qaadi lahaa Gudoomiyaha Golaha Shacabka Mudane Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari).
Raysul wasaare Khayre ayaa ku baxshay lacag aad u fara badan oo laaluush ah, taasoo uu u adeegsaday inuu xilka uga qaado Jawaari.
Muqdisho Online ayaa ummadda Soomaaliyeed usoo gudbinaysa liisas ay ku qoran yihiin Xildhibaanada laaluush qaatayaasha ah ee LAALUUSHKA qaatay lagana saxiixay inay ridaan ama xilka ka qaadayaan Gudoomiye Jawaari, iyagoo la DHAARIYEY lagana duubay kaamero taasoo meel ka dhac ku ah XASAANADDA ay huwan yihiin, matalaada Shacabka iyo sharafta Golaha Shacabka.
Liisaska oo ka kooban shan qaybood ayaa waxay u kala qoran yihiin qaab qabyaaladaysan waxayna u qoran tahay beel walba si gooni ah, iyadoo qabiil walba looga saxiixay liiska si gaar ah taasoo ah meel ka dhac kale iyo ilhaano loo gaystay midnimada wadajirka iyo haybadda Baarlamaanka Soomaaliyeed.
Habkaan qabyaaladaysan ayaa banaanka usoo saaraya qabyaaladda iyo sifooyinka aaadka u foosha xun oo ay isticmaalaan kooxda la baxday NABAD & NOLOL, iyagoo Xildhinaanadii u kala saaray qaab qabiil.
Sida ay xogta ku heshay Muqdisho Online laaluushka ayaa ahaa mid kala heer ah, iyadoo kan ugu hooseeya la siiyey 40.000$ halka qaar la siiyey Laaluush gaaraya 300.000$ oo ka kooban Gaadiid aan Xabadu karin iyo lacag kaash ah.
Xildhibaanada Laaluushka badan qaatay anagoo gooni usoo qori doona waxaan hadda kasoo qaadaynaa Laaluushka ugu yar ee la bixiyay 40.000$ waxaana laga saxiixay 192 Xildhibaan markaas waxay noqonaysaa in Khayre ku qarashgareeyey laaluush ahaan ugu yaraan lacag dhan 7.680.000$ (Todobomalyan iyo lixboqol iyo sidankun dollar).
Lacagtaas badan ee Laaluushka ay ku bixisay Xukuumadda Khayre haddii dalka si daacadnimo ah loo gelin lahaa waxay wax ka bedeli lahayd Nolosha, Nabadgelyada, Caafimaadka, Waxbarashada, Jidadka iyo kor u qaadida wax soosaarka dalka.
Tusaalaha koowaad: haddii nabadgalyada magaalada Muqdisho loo qoro 10.000 Askeri oo xasilisa waxay mushahaarkooda dabooli lahayd lacagtaan Laaluushka loo baxshay 8 bilood (10.000x100x7,5 =7.500.000$)
Tusaalaha labaad: Shacabka Soomaaliyeed waxay la daalaa dhacayaan helida biyo Nadiif ah oo ay Cabaan taasoo nolosha u ah aasaas, hadaba lacagta uu Khayre Laaluushka u baxshay waxay dalka Soomaaliya ka qodi kartaa 51 Ceel biyood, taasoo wax wayn ka bedeli lahayd nolosha shacab Soomaaliyeed oo ku nool Gobolada Dalka ee biyo la’aanta baahsani ka jirto (7.680.000$/150.000$=51,2 Ceel Biyood).
Tusaalaha sadexaad: Shacabka Soomaaliyeed waxay la daalaa dhacayaan helida adeeg caafimaad gaar ahaan haweenka soomaaliyeed oo aan 2018ka wada haysan meel ay ku umulaan iyo Dhalaanka Soomaaliyeed oo aan wada haysan meel Caafimaadkooda lagu daryeelo taasoo ah mid ay xaq u leeyihiin, meeqa MCH ama goob Caafimaad ayey u dhisi kartaa lacagta uu Khayre Laaluushka ku baxshay?
Lacagtaas aadka u faraha badan oo uu Khayre laaluush ahaan uu ku baxshay waxay ummadda Soomaliyeed u qaban lahayd mashaariic wax ku ool ah ama waxay dabooli lahayn Mushahaarka Ciidamadeena difaaca ku jira har iyo habeen ama ay daryeeli lahayd.
Dawladaan la magac baxday NABAD & NOLOL kuna timid xilka inay la dirirayso MUSUQMAASUQA ayaa noqotay tii ugu MUSUQMAASUQA badnayn dawladihii u dambeeyey ee lagu xaman jiray Musuqmaasuqa.
Waxaa xaqiiq ah inay Soomaaliya iyo dib u dhisidii dawladnimadeeda ay dhabar jab wayn oo dhaqaale ama shaqo uu ku keenay weerarkii ay Khayre iyo Fahad ku qaadeen Jawaari, iyagoo si Musuqmaasuqa u isticmaalay hantidii ummadda dayacayna shaqadii loo igmaday.